Danjire Mahiga oo maanta Haweenka Soomaalida kala hadlay doorka ay ka qaadan karaan siyaasada dalka. | Somali News Politics Documentaries Music Videos Intertainment
WordPress.com	Danjire Mahiga oo maanta Haweenka Soomaalida kala hadlay doorka ay ka qaadan karaan siyaasada dalka.
Posted on June 18, 2012 by SomaliSwiss	Kulan xasaaasi ah oo maanta ka dhacay xarunta Xalane loogana hadalayay doorka ay ka qaadan karaan haweenka Soomaaliyeed siyaasada dalka, ayaa Ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya, waxa uu la yeeshay wasaarada Haweenka, xubno ka tirsan Baarlamaaka KMG ah iyo ururada Haweenka.
Wakiilka QM ee Soomaaliya Augostine Mahiga oo kulanka khudbad ka jeediyay ayaa waxaa uu si cad u sheegay in ragga iyo haweenka loo baahanyahay inay u sinaadaan awooda dalka.
Danjir Mahiga Wuxuu sheegay inay sidoo kale muhiim tahay in haweenka iyo raga ay dhexmarto wada shaqeyn maadaama sida uu sheegay ragga aysan awood lahayn hadii aysan gacan ka helin dumarka.
Ambassador Mahiga ayaa hoosta ka xariiqay in haweenka Soomaaliyeed looga baahan yahay ka qeyb galka shirarka looga hadlayo xal u helida dhibaatada ka taagan dalka Soomaaliya islamarkaana ay qeyb ka yeeshaan go,aanada soo baxaya si ay u hergasho heshiiskii Garoowe 2 ee ahaa in haweenka ay 30% ku yeeshaan hanaanka awood qeybsiga.
Su’aal ay weydiiyeen Hawenkii kulanka ka soo qeybgalay Mahiga ayaa aheyd qaab ceenkee ah ayay ku suura geli kartaa in haweenka ay helaan heshiiskii Garoowe 2 ee dhigayay in 30% ay helaan haweenka, ayaa waxa uu ku jawaabay Mahiiga in heshiiskaasi lagu xaqiijin doono labo arrimood oo kala ah.
1: Sameynta guddi farsamo oo madaxbanaan
2: kormeerayaal caalami ah oo eegi doono qaabka loo fulinayo dhamaan heshiisyadii Garoowe.
Maryan Aweys Jaamac Wasiirada Haweenka iyo arrimaha qoyska xukuumadda KMG Soomaaliya oo gaba gabadii kulanka ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in haweenku ay yihiin udub dhaxaadka horumarka wadan waliba.
Dhinaca kale Haweenka Soomaaliyeed ayaa loo ogolaaday in 30% inay ku leeyihiin xubnaha Baarlamaanka la filayo in dhawaan uu yeesho dalka Soomaaliya, waxaana kulanka maanta uu ahaa mid Mahiga uu ku dhiiri gelinayay haweenka Soomaaliyeed si siyaasada ay ugula tartamaan ragga.
Filed under: Muqdisho « Maamulka Somaliland oo shaaca ka qaaday in 20-ka Bishan uu London si rasmi ah uga furmi doono wadahadalladii u dhaxeeyey iyaga & dowladda KMG Soomaaliya. Qarax is-midaamin ah oo ka dhacay dalka Yeman, laguna eedeeyay Soomaalida kunool Waddankaasi. »